Accueil > Gazetin'ny nosy > Josékely sy Jesy Rabelaolao: “Zaraiko ho an’ny tanora ny traikefa keliko”
Josékely sy Jesy Rabelaolao: “Zaraiko ho an’ny tanora ny traikefa keliko”
Tanora marobe hatrany no miatrika an’ingahy José Andrianoelison na i José-kely araka ny nahafantaran’ny be sy ny maro azy. Tany amin’ny fizarana traikefa ho an’ny tanora tany Miarinarivo Itasy no nanamafisany izany indray ny asabotsy faha 18 novambra 2017 lasa teo tao amin’ny Lycée Katôlika ao an-toerana. Araka ny fanirian’ireto mpianatra sy tanora ireto dia nangataka tantsoroka amin’ingahy Josékely sy Jesy Rabelaolao izay mpanao gazety amin’ny hanomezana azy fiofanana mikasika ny asa fanaovan-gazety ireto tanora any Miarinarivo Itasy ireto. Izany moa dia nivoitra tamin’ny alalan’ny fangatahan’izy ireo taorian’ny fahitan’ireo tanora ireo ny fanofanana izay nataon’izy roalahy ireto maimaim-poana nandritra ny fialan-tsasatra lehibe 2017 iny ho an’ny tanora teto Antananarivo. Marihana fa niisa 200 teo ho eo no nahazo izany ny teto andrenivohitra.
Tanteraka izany fanirian’ny tanora any Miarinarivo Itasy izany ka fantatra izao fa ao anatin’ny iray volana dia fiofanana miompana amin’ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera amin’ny ankapobeny ary ny fanabezana olom-pirenena no omen’ingahy José Andrianoelison (José-Kely) sy Jesy Rabelaolao amin’izany. Nampifanarahana amin’ny filana tadiavin’ny tanora tany an-toerana ny fiofanana io fa tsy nitovy tanteraka tamin’ny filana teto Antananarivo renivohitra. Miisa 100 eo ho eo no mpandray anjara ka ahitana sokajin’olona maro toa ny mpianatra amin’ny lycée sy Ceg, mpamboly, mpianatra amin’ny oniversite ary mpampianatra any amin’ny sekoly samy hafa any an-toerana. Misy mihitsy no avy any amin’ny 15 km miala an’i Miarinarivo Itasy no tonga manenjika ity fiofanana ity.
Maimaim-poana ny fiofanana satria ny mpampiofana dia mitondra ny tarigetra sy ny faneva hoe: “aoka hizara maimaim-poana ho an’ny taranaka izay mba nomen’Andriamanitra fahasoavana kely”. Nanampy azy roalahy ireto koa ny fikambana mitondra ny anarana hoe “Madagasikara Nosy Sambatra” , izay tarihin-dramatoa Ony Rabemanantsoa izay manampy ny mpiara-belona ka manana fijery hihoitra amin’ny fiainana sy manana tanjona mazava nefa manana olana amin’ny fanatanterahana izany.